सूर्यबहादुर थापा :- मृत्युपछि समेत विवाद ! - सूर्यबहादुर थापा :- मृत्युपछि समेत विवाद !
२०७6, ३ बैशाख, 08:26:17 PM
काठमाडाैं । विवादास्पद मानिसले बाँचुन्जेल मात्र होइन मरेपछि पनि विवाद उठाईदिरहन्छ भन्ने नेपाली आख्यान पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको मृत्युको चौथो वार्षिकी बैशाख २ (०७६) मा मनाउने क्रममा देखापरेको छ ।
‘सूर्यबहादुर थापा प्रतिष्ठान’ नामक एउटा संस्था स्थापना गर्न काठमाडौंस्थित एउटा दूतावासले ठूलो धनराशी लगानी गरेको भन्ने पहु्ँचवालाहरूकै बैठकहरूबाट सुनिएका चर्चा नसेलाउँदै सो प्रतिष्ठानले नेपाली पत्रपत्रिकालाई छोडेर ‘दक्षिणमुखी’ भनिएको एक अंग्रेजी दैनिकमा अंग्रेजीमा विज्ञापन प्रकाशित गरेको कारणले उक्त चर्चालाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । सूर्यबहादुरको गुणगान विषयक लेख अहिलेको सर्वाधिक बिक्री हुने नेपाली दैनिक अन्नपूर्ण पोस्टमा छपाएर विज्ञापन चाहिँ अर्कै (अंग्रेजी) दैनिकमा छपाएपछि अन्नपूर्णका सम्पादकीय स्रोत, उक्त प्रतिष्ठानको बदनियतबारे उदेक मानेर औंल्याउँछन् ।
निधन पनि विवादमा !
नेपालका नेताहरू, खासगरी प्रधानमन्त्री भईसकेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनको अन्तिम दिन आइसक्यो भन्ने बुझेपछि जतिसक्दो छिटो स्वदेश फर्किने चाहना राख्छन् । बीपी कोइरालादेखि मरिचमान सिंहसम्मले यही जोड गरेकोले विदेशमा उनीहरूको बाँकी उपचारको प्रयास स्थगित गरी स्वदेश ल्याइएका उदाहरणका विपरित सूर्यबहादुर थापाको निधन विदेश (दिल्ली) को धर्ती (मेदान्त अस्पताल) मा भयो ८८ वर्ष उमेरमा २०७२ बैशाख २ बुधबार राती १०.४४ बजे । त्यहाँ उनको पेटको अपरेशन गरिएको थियो । त्यसको करिब १ महिनाअघि चैत्र ८ गते उनले आफ्नो ८८ औं जन्मोत्सव भव्यरुपले मनाएका थिए ।
“‘मसँग पञ्चायत जिताउन भनेर चन्दा मागिएको छ,’ आरएनएसीका जिएमले डराउँदै मेरो अफिसमा आएर भने, ‘इमान्दारीपूर्वक काम गरेर कसरी लाखौं चन्दा दिन सकिन्छ ।’ यो सूचनाले मलाई दुखी बनायो । केहि दिनमा नेशनल ट्रेडिङ्का जिएम भेट्न आए । उनको दुखेसो पनि उस्तै थियो, ‘चन्दा दिएनौं भने देख्लास् भनेर थ्रेट आएको छ ।’ अब मलाई छर्लङ् भइहाल्यो पञ्चायतका नाममा सरकारले नै चन्दा आतंक सुरु गरेको रहेछ । त्यस्तो चन्दा कसैले आफ्नो घरघरानाबाट दिँदैनथ्यो । जुन सरकारी निकायमा काम गर्छ त्यहीबाट चोरेर दिने न हो । प्रधानमन्त्रीले नै चन्दा मागेपछि कसलाई के को डर । दिन नचाहने बृहस्पतिहरु मसँग आए ।”
दिल्लीबाट उनको पार्थिव शरीर भारतीय सेनाको विशेष विमानद्वारा काठमाडौं ल्याइयो । भारतीय सेनाले त्यसरी लाश बोक्न त्यहाँका प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । निधनको पर्सिपल्ट बैशाख ४ गते १ दिन सार्वजनिक बिदा दिई उनको अन्त्येष्ठी राजकीय सम्मानका साथ गरियो । अन्त्येष्ठीको त्यस्तो ब्यवस्थाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे अनुरुप भएको थियो । यिनै थापा प्रधानमन्त्री र नैनबहादुर स्वाँर गृहमन्त्री थिए, जसले २०३९ साल साउनमा जननायक बीपी कोइरालाको निधनमा छुट्टी दिनुपर्ला भनेर निधनको सम्भावना देखेपछि हतारहतार मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधन हुँदा सार्वजनिक बिदा नदिने निर्णय गरेका थिए । तर बीपी खलकका अर्का भाई सुशील प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सूर्यबहादुरको त्यस्तो हर्कतप्रति कुनै बदला वा प्रतिशोधको भावना राखेनन् ।
पैसाका मामिलामा सूर्यबहादुर थापा कतिसम्म नीच कर्म गर्थे भन्नेबारे वरिष्ठ पत्रकार पदम ठकुराठीलाई गोली लागेर बैंककमा उपचार गराउँदा त्यसको आडमा कसरी पैसा उठाइयो भन्ने सन्दर्भमा स्वयं ठकुराठीको भनाई, “सूर्यबहादुर थापाले चलाएको पत्रिका (साप्ताहिक विमर्श) ठानेर मारवाडी ब्यापारीहरूले ४० लाखजति बुझाएका रहेछन् । थापाले जनार्दन आचार्यमार्फत तीन किस्ता गरेर २ लाख ५५ हजार (रु.) मात्र दिए ।….म आठहजार भाटमा प्लास्टिकको आँखा हालेर फर्किएँ”(नेपाल साप्ताहिक म्यागजिन, २२ असोज ०७४ को दशैं अंकमा ‘बोनस ३१ वर्ष’ शीर्षकमा राजकुमार बानियाँको प्रस्तुतीमा पदम ठकुराठी, पृ. ४४) ।
‘नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू’ को नालीबेली (पुस्तक) प्रकाशनमा लागेका वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रमणि गौतमले थापा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भा.रु. सँग ने.रु. अवमूल्यन र पुनर्मूल्यनका काण्डबाट उत्पन्न गरिएको मौद्रिक अस्थिरता, अर्थतन्त्रको बेथिति, २०२६ सालमा थापा लगायत चैतुलाल चौधरीसमेतका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूलाई राजा महेन्द्रले लेखेको चिठी, २०२९ सालमा थापाले मच्चाएको ‘द्वैध शासन’ नामक वितण्डा जस्ता रहस्योद्घाटन गर्नेखालका अनेकौं विवरणहरू बटुल्दै रहेको बुझिएको छ ।
०३६ सालको ‘पूण्यकर्म’
सूर्यबहादुर थापा कुन स्तरको राजनीतिक प्राणी थिए भन्ने वास्तविकता उनी २०३६ सालमा प्रधानमन्त्रीका साथै अर्थमन्त्री पनि आफैं भएका बेला तत्कालीन अर्थसचिव रहेका डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले अनलाईन पत्रिका ‘सेतो पाटी’ लाई सूर्यबहादुर थापाको निधनको केही दिनपछि बताएका थिए, जुन विवरणको मूख्य अंश :-
“सूर्यबहादुर थापा शासन प्रशासनको नस नस बुझेको प्रधानमन्त्री । ऐन, कानून, नियम पनि कन्ठस्थ । उहाँले निर्णय गर्न चाहे कानूनकै दफा देखाएर तर्क गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यही विषयमा निर्णय गर्न नचाहे पनि कानूनकै आडमा अरुलाई चुप लगाइदिन सक्नुहुन्थ्यो । कानूनको दफाको आडमा फाइल घुमाउन सक्ने काईते कर्मचारी भन्दा पनि माहिर ।”
“मेरो विभागीय मन्त्री पनि हुनुभएकाले म रातबिहान प्रधानमन्त्री निवास गईरहनु पर्थ्यो । कुनै एकदिन विहान ६ बज्नुअघि नै मलाई निवासमा बोलाइयो । प्रधानमन्त्रीले मलाई बेडरुममै डाक्नुभयो । उहाँ त झुलभित्र फाइल पढिरहनुभएको छ । खाटमा चाङ्का चाङ् फाइल छन् । प्रधानमन्त्री तीनै फाइलहरुसँग रात काटेजस्तो दखिन्थ्यो । यो घटनाले पनि मलाई उहाँ प्रत्येक फाइल पढेर निर्णय गर्नुहुन्थ्यो भन्ने सम्झना हुन्छ ।….
“‘तुलसी गिरीले पञ्चायतको साइनबोर्ड मात्र बाँकी छ, बहुदल आइसकेको छ भन्नुभयो,’ मैले थापाज्यूलाई भने, ‘पार्टीहरुसँग सम्झौता गरेर केहि राजनीतिक निकास निकाल्न सकिन्छ कि ।’ यो सुझावमा मैले उहाँमा अघिपछि जस्तो सौहार्द्रता देखिन । ‘मलाई हटाएर विश्वेश्वरलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनुस्,’ उहाँ कड्किनु भयो । गोरो अनुहार पनि रातोपिरो भयो । चस्माभित्र पनि आँखा लाल देखिए । मैले कुनै प्रतिक्रिया गरिन । राजनीति मेरो प्रत्यक्ष सरोकारको विषय नभएकाले मौन बसे ।”…….
“‘दरवारले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर पञ्चायतलाई जिताउन सूर्यबहादुरलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बनाएको हो,’ मेरा शुभेच्छुकहरु चिन्ता व्यक्त गर्थे, ‘तिमीलाई काम गर्न अप्ठोरो पार्लान् है ।’ नभन्दै मेरो टेबुलमा बजेट रकमान्तरको फाइलको चाङ् लाग्न थाल्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पानी, बिजुली जस्ता आधारभूत सेवाका बजेट काटेर अन्यत्र लाने प्रयास हुन थाल्यो । अनुचित लागेका जति फाइल मैले स्विकृत गरिन ।
सूर्यबहादुर थापा रकमान्तरको पक्षमा, म विपक्षमा । अधिकार मेरै थियो । निर्णय गर्ने अधिकारी मै भएपछि उहाँको मनसुवा सजिलै पुरा भएको थिएन । ‘अलिअलि आँखा चिम्लिदिनुस् न सचिवज्यू,’ प्रधानमन्त्री अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो, ‘जहाँ गरेको खर्चले धेरै प्रतिफल आउँछ त्यतै लैजाऊ भन्ने मात्र हो ।’ “रकमान्तरमा मैले अवरोधकको काम गरे । कर्तव्यपालन गर्न सकेकोमा दंग परे । रकमान्तरबाट बजेट दुरुपयोग गर्न खोजिएको मेरो शंका थियो ।”
मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा एउटा नयाँ ‘थिति’ बसालियो– कर्मचारीसँग पैसा उठाउने । त्यसभन्दा अघि सरुवा, बढुवा वा अरु निहुँमा कर्मचारीसँग माथिका मानिसले पैसा खान्छन् भन्ने कसैले चिताउन पनि सक्दैनथ्यो । हामी राज्यको सिस्टमभित्रै बसेकाहरुले पनि कर्मचारीसँग माथिका मानिसले पैसा खान्छन् भन्ने कल्पना पनि गर्दैनथ्याैं।” “यसले मात्र पुगेन जनमत संग्रहको नाममा जंगल सखाप पार्ने काम सुरु भयो । तराईमा रातारात स–मिलहरु खडा भए । मेचीदेखि महाकालीसम्म चारकोसे झाँडीको सालको जंगल सखाप पारेर भारत पुर्याइराखिएको हामी पनि सुन्थ्यौँ । जनमत संग्रहको नाममा मुलुकले वनजंगल क्षेत्रमा अपुरणीय क्षती व्यहोर्यो ।”
“धेरैलाई त बाँदरलाई लिस्नु हालिदिए जस्तो भयो । फट्याइ गर्न खोज्ने मन्त्री, सचिव, जीएम, हुँदै तलसम्मैकाले जर्ती काटेर आफ्नो भाग राखी पञ्चायत जिताउने नाममा प्रधानमन्त्रीलाई चन्दा दिने भए । म रकमान्तर रोकेर राज्यको ढुकुटीमा पर्न लागेको दूलो टाले भनेर मख्ख । अन्त भ्वाङ् परिसकेको रहेछ । दुरुपयोगको भेल नै बग्न थालिसकेको थाहा हुँदै गयो । अन्यत्र र अर्थ मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी सरुवाको चलखेल हुन थाल्यो । फलानालाई कर, भन्सार ल्याइदिनुर्पयो भनेर प्रधानमन्त्री आफैले फोन गर्न थाल्नुभयो । भ्रष्टाचारको गुञ्जायस रहेको अरु मन्त्रालयमा पनि त्यस्तै भएको सुनिन्थ्यो ।
मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा एउटा नयाँ ‘थिति’ बसालियो– कर्मचारीसँग पैसा उठाउने । त्यसभन्दा अघि सरुवा, बढुवा वा अरु निहुँमा कर्मचारीसँग माथिका मानिसले पैसा खान्छन् भन्ने कसैले चिताउन पनि सक्दैनथ्यो । हामी राज्यको सिस्टमभित्रै बसेकाहरुले पनि कर्मचारीसँग माथिका मानिसले पैसा खान्छन् भन्ने कल्पना पनि गर्दैनथ्याैं।”
“यसले मात्र पुगेन जनमत संग्रहको नाममा जंगल सखाप पार्ने काम सुरु भयो । तराईमा रातारात स–मिलहरु खडा भए । मेचीदेखि महाकालीसम्म चारकोसे झाँडीको सालको जंगल सखाप पारेर भारत पुर्याइराखिएको हामी पनि सुन्थ्यौँ । जनमत संग्रहको नाममा मुलुकले वनजंगल क्षेत्रमा अपुरणीय क्षती व्यहोर्यो ।”
सरकारले कर फछ्र्यौट आयोग बनायो । त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो डा. यादवप्रसाद पन्त । व्यापारिक फर्महरुलाई करोडौं आयकर मिनाहा दिने निर्णय हुनथाल्यो । जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउने नाममा जथाभावी निर्णय भइरहेका थिए । राजस्वमा ब्रम्हलुट चलेको थियो । म पनि आयोगको पदेन सदस्य थिएँ । म एकातिर अरु सबै अर्कातिर हुन्थे ।……..रकमान्तर, कर्मचारीसँग असुली, राजश्व मारेर व्यापारी मोटाउन दिने र नदिने भन्ने विषयमा मेरो र प्रधानमन्त्रीको मतान्तर बढ्दै गइरहेको थियो । म स्पिड ब्रेकर हुन खोज्थे । प्रधानमन्त्रीको गति तेज थियो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘पञ्चायतलाई जिताउनु परेन ?’”
“दरबारलाई पनि रकमान्तर गरेर बजेट हारलहुरल, कर मिनाहा, कर्मचारी, व्यापारीसँग असुली गर्नुपरेको रहेछ । कि मपनि विवेक गुमाएर मतियार बन्नुर्पयो । हैन भने जागिर छाडेर बाटो लाग्नु जाती । मैले दोस्रो बाटो रोज्ने भएँ । राजिनामा ड्राफ्ट गरे । …..मुलुकका १०१ व्यक्तित्वलाई गलैँचाकाण्ड लागेको झलझली सम्झिएँ । दरबार लाग्नुभन्दा नै पहिला नै मैदान खाली गरिदिनु वुद्विमानी, मेरो ठम्याइ थियो ।”
रकमान्तर, कर्मचारीबाट असुली र कर मिनाहामा सरकारबाट भइरहेको अनियमितताबारे बताएँ ।……राजा हैन अरुले नै बदमासी गराइरहेका छन् भन्ने मेरो विश्वास सिसा झैँ चकनाचुर भयो । राजाले नै पञ्चायतको पक्षमा धाँधली चाहिरहेको पनि बुझेँ । प्रधानमन्त्रीले कतिपटक कम्प्लेन गरेपछि मलाई भन्नुपर्ने अवस्था आयो होला भन्ने पनि अनुमान लगाएँ ।…..माघ मसान्तमा प्रधानमन्त्रीकहाँ लगेर राजिनामा दर्ता गराएँ ।…..”
“…….(राजा) विरेन्द्र मातहत काम गरेको दश वर्ष नाघिसकेको थियो । उनले कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको मलाई सम्झना थिएन ।…….यसपाला विभागीय मन्त्री प्रधानमन्त्री स्वयं ।….. प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नै शैलीमा काम गरिरहनुभएको थियो । म पनि आफ्नो स्टाइलबाट टसमस भएको थिँइन ।…..प्रधानमन्त्री देश दौडाहामा हुनुहुन्थ्यो । पञ्चायतको पक्षमा चुनाव प्रचार गर्न । राज्यको स्रोत साधन खर्चेर प्रम पञ्चायतको पक्षमा दौडाहा गर्नुले निष्पक्ष निर्वाचनको संकेत गर्दैनथ्यो ।…..कहिलेकाँही हाम्रो भेट हुन्थ्यो । तर सम्बन्ध चिसो हुँदै गएको थियो । उहाँले अह्राएको नहुने काम म गर्दैनथे । पन्छाइदिन्थेँ ।”
“…..माघ अन्तिम सातातिर दरवारबाट बोलावट आयो । ‘पीएमको कार्यक्रममा सहयोग गरिदिनुर्पयो,’ दरवारका उच्च अधिकारीले भने, सरकारबाट हुकुम भएको छ ।’ म छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ । दरवारका सचिवले दुई महिना अघि जे भनेका थिए । अहिले त्यहि आदेश आयो । रकमान्तर, कर्मचारीबाट असुली र कर मिनाहामा सरकारबाट भइरहेको अनियमितताबारे बताएँ ।……राजा हैन अरुले नै बदमासी गराइरहेका छन् भन्ने मेरो विश्वास सिसा झैँ चकनाचुर भयो । राजाले नै पञ्चायतको पक्षमा धाँधली चाहिरहेको पनि बुझेँ । प्रधानमन्त्रीले कतिपटक कम्प्लेन गरेपछि मलाई भन्नुपर्ने अवस्था आयो होला भन्ने पनि अनुमान लगाएँ ।…..माघ मसान्तमा प्रधानमन्त्रीकहाँ लगेर राजिनामा दर्ता गराएँ ।…..” (‘सेतोपाटी’ अनलाईनको ०७२ बैशाख ४ गतेको अंकमा सम्पादक अमित ढकाल र किरण भण्डारीले डा. पाण्डेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित) ।
यिनै थापालाई ‘महान राजनेता’ भनी मरणोपरान्त सिंगारपटार गर्ने दुस्साहस गरेको र यस कार्यमा कुनै दूतावासको समेत संलग्नता भएको हल्ला अपराधको राजनीतिकरण नाप्ने ब्यारोमिटर हुनपुगेको छ ।